Njikọ waya maka VW Audio, UL 2468 PVC
Nkọwapụta Modeldị Ngwaahịa Nọmba ọnụ ọgụgụ: eriri mmetụta-06 Aha aha: Olink Mmalite: China (Chile) A na-ejikarị eriri eriri dị ka geometric na eletriki chọrọ. Mgbe ahụ, a na-enye eserese (ma ọ bụ na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ na ileba anya) maka nkwadebe na mgbakọ. A na-ebu ụzọ wepụ wires ndị ahụ n'ogologo achọrọ, na-ejikarị igwe na-egbutu waya pụrụ iche. Enwere ike ibiputa wires ndị ahụ site na igwe pụrụ iche n'oge oge igbutu ma ọ bụ na igwe dị iche. Mgbe nke a gasịrị, e ...
Eriri USB maka ụgbọ ala Audio, eriri USB nzukọ UL PVC cable
Nkọwa ngwaahịa Ngwaahịa aha Ahịrị Ikuku USB Assembly Asambodo ISO9001 / ROHS / CE / UL Brand Name Olink Origin China (Chile) Ọrụ ODM Ngwaahịa Ogologo 10000mm (ahaziri) Agba Nhọrọ mkpuchi Ihe PVC Plastic Product Description Key nkọwa / Atụmatụ pụrụ iche: Jiri UL 1007 Wirekwanyere waya fiusi tub na a ịghasa eri mkpọchi na njikọ maka mgbanwe na-inogide Raw ngwaọrụ All akụkụ na nhazi bụ Dabara na ROHS Original Huizho ...
Eriri USB maka ụgbọ ala Audio, nzukọ USB cable UL 2468 PVC
Qi wireless chaja cable mgbakọ maka FordGMChryslerChevrolet
Ogwe Njikwa Akpaaka maka Igwefoto Reverse na HD Rearview Parking Line
Auto waya njikota, OEMODM waya njikota maka pụrụ iche ụgbọala
Nkọwapụta Modeldị Ngwaahịa Nọmba ọnụ ọgụgụ: eriri mmetụta-06 Aha aha: Olink Mmalite: China (Chile) A na-ejikarị eriri eriri dị ka geometric na eletriki chọrọ. Mgbe ahụ, a na-enye eserese (ma ọ bụ na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ na ileba anya) maka nkwadebe na mgbakọ. A na-ebu ụzọ wepụ wires ndị ahụ n'ogologo achọrọ, na-ejikarị igwe na-egbutu waya pụrụ iche. Enwere ike ibiputa wires ndị ahụ site na igwe pụrụ iche n'oge oge igbutu ma ọ bụ na igwe dị iche. Mgbe nke a gasịrị, en ...
Auto waya njikota, OEMODM waya njikota maka Automotive
Molex IDE ka SATA nweta ike nkwụnye Y USB
Waterproof nri n'akuku m12 nwanyi mmetụta USB
Waterproof aka nri m12 5-pin nwanyi sensor cable
Ahịa imewe USB Ihe mmetụta USB, Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ